Unicode | Lionslayer : The Legend
Posts Tagged 'Unicode'
ရှေ့ကဖတ်ဖတ် နောက်ကဖတ်ဖတ် အတူတူဖြစ်တဲ့ စာလုံး၊ စာကြောင်း၊ ဝါကျ၊ ကိန်း နဲ့ အခြားသော ယူနစ်များကို ပယ်လင်းဒရုမ်း​လို့ ခေါ်တယ်။
civic, radar, level, rotor, kayak, reviver, racecar, and redder
“Was itarat I saw?”, “Step on no pets”, “Able was I ere I saw Elba”, “Dammit, I’m mad!”, “Rats live on no evil star”
Three famous English palindromes are “Able was I ere I saw Elba” (which is also palindromic with respect to spacing), “A man,aplan,acanal, Panama!”, and “Madam, I’m Adam” or “Madam in Eden, I’m Adam”
Well, these were English palindromes paragraphs I copied from Wikipedia. Myanmar also have infamous “ဘူးသီး​မသီးဘူး” (Bottle gourd is not fruiting) palindrome. Anymore? Nah!… Not many more.
Burmese isacomplex script in which words are formed by single or multiple syllables. Vowels are mostly dependent which make nearly impossible to make character level palindromes. But we can still makeafew short palindromes combining characters without dependent vowels.
Burmese character level (အက္ခရာ) palindromes:
ဝဝ မဝဝ (fat or not)
ကက မကက (dance or not)
စစ မစစ (tease/start or not)
The character list for xxမxx palindromes: ကခစဆတထနမရဝသဟအ
There are also some rare palindromic vocabularies (more than2characters).
Syllable level palindromes:
Syllable level (ဝဏ္ဏ) is more suitable for making Burmese palindromes. There can be hundreds (or) even thousands combination we can make using syllables. For example,
စားစားမစားစား (eat or not)
စားချင်စား/စားရင်စား (eat if you want)
စားကစား/စားမှစား (eatalot)
စားလည်းစား (eat too)
စားသာစား (eat all you want)
စားတော့စား (eat, but) etc.
There are some syllable level palindromic words too.
ကြီးတော်ကြီး (Big aunt)
စင်ကိုးစင် (nine stages)
ပုံတစ်ပုံ (one picture)
ရေခဲရေ (ice water)
Ok. Here comes the main part. There never has beenaproper Burmese palindrome which is more than 10 syllables. I playedabit with words in my sketch book.
မလေးအမေ – မေအလေးမ
ကညာအပျို – ပျိုအညာက
စားသောက် – သောက်စား
And I combined them together to getareasonable sentence and finally gota21 syllables palindrome.
“ကညာအပျို မလေးအမေ ထထ မထထ မေအလေးမ၊ ပျိုအညာက။”
Ma Lay’s virgin mom (or Virgin Ma Lay’s mom) is waking up or not, May from Ah Nyar is lifting weights. (Ah Nyar /a̱nja/ is upper reaches of Irrawaddy river.)
ဟန်သစ်ငြိမ်ရဲ့ ငြိမ်သစ်ဟန် inspired me.
Tags: burmese_palindrome, Myanmar, palindrome, Unicode
ယူနီကုဒ် မြန်မာရီးတီးယားတား ၂၀၁၁
ဥုံ သျှရီ သျှရီ ယခုကား မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၂ မှ ၁၃၇၃ သို့ အကူးတည်း။ ဘလော့မြန်မာ အမည်ရှိရှိသော ဗြဟ္မာကြီးဦးခေါင်းကို ယူနီအမည်ရှိ နတ်သမီးမှ လက်ကမ်းယူသတည်း။ ယင်းကြောင့် နှစ်စတွင် မြန်မာဘလော့လောကကြီး ပူညံပူညံ ဖြစ်လတ္တံ့။ ပြောင်းသူတို့ကလည်း ပြောင်းပြီပြောင်းပြီဟု ဝမ်းသာအားရပြောကြလတ္တံ့။ မပြောင်းသူတို့ကလည်း သေတောင်မပြောင်းဘူးဟု ခံငြင်းကြလတ္တံ့။ အများစုသောသူတို့ကား နားစွန်နားဖျားနှင့် ယူနီကို အသေရိုက်သတ်ချင်အောင် ချစ်ခင်ကြလတ္တံ့။ အကုန်ပြောင်းရင် ပြောင်းမယ်ဟု ဆိုသူတို့ကလည်း ဆိုကြလတ္တံ့။ အချို့ကလည်း စကားရောဖောရောဖြင့် ယိုးဒယားတွင် သွားပြောင်းခဲ့သည်ကို စကားမရှိ စကားရှာ ပြောကြလတ္တံ့။
မုခမျက်နှာရပ်ဝန်း(ဖဗ)တွင်မူ ယူနီသုံးသူအပေါင်းတို့ တောက်ညင့်ကပ် ခံရလတ္တံ့။ အားနာသူတို့ကား ပြန်ပြောင်းကြလတ္တံ့။ အချို့ကား ဧကန်အလုပ်ရှုပ်ခံ၍ နှစ်မျိုးလုံးနှင့် ရေးကြလတ္တံ့။ ပေါ်ပျူလာမဖြစ်သူတို့ကား ဂရုစိုက်စရာမရှိပြီ ဖြစ်ရကား ယူနီကို တွင်တွင် သုံးသည်ချည်းသာ ဖြစ်လတ္တံ့။ ဤသို့ အကြောင်းမူ အခြေပြုရကား ကွန်ဗာတာဆော့ဝဲတို့ ဟစ်ပွိုင့်တက်လတ္တံ့။
ယူနီသမားတို့ ပြောင်းခါစတွင် ဂြိုဟ်သားစာများကို လာကြည့်သူတို့ကြောင့် ဟစ်ပွိုင့်တက်ရကား ဝမ်းမြောက်ကြလတ္တံ့။ ဖတ်မရ မမြင်ရပြောသူများကြောင့် လိုက်ရှင်းနေရသည်များသောကြောင့် နောက်ပိုင်းတွင် စိတ်တွင်တွင်ကြီး ရှုပ်ရလတ္တံ့။ နဂိုစိတ်ရှည်သူများ ဒေါသထွက်၍ စိတ်တိုတတ်သူများ သည်းခံလာတတ်လတ္တံ့။
ယားသူတို့သာကုတ်သည်ဟူ၍ ဒဒွေးသုံးခိုင်းသူတို့လည်း ရှိလတ္တံ့။ ယူနီကို တစ်ချက်ထိလျှင် တစ်ချက်ပြန်ပက်၊ တစ်ခွန်းပြောလျှင် တစ်ခွန်းပြန်တုံ့သူတို့ ရှိထသည် ဖြစ်မူ၍ ဟမ်မူရာဘီ ကိုဓဥပဒေ(Code of Hammurabi) အလား ယူနီကိုဓ (Unicode) ဟု အမည်နာမသည်လည်း တွင်လတ္တံ့။
ဤသို့ယူနီ ကို လူမညီသည့် အပူသည်ဟု ရှုံ့ချသည်လည်း ရှိလတ္တံ့။ ယူနီပါလျှင် ပွဲဆူသောကြောင့် အကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာ ယူနီပါအောင် ပြောကြလတ္တံ့။ ယူနီခေတ်စားသောကြောင့် ယူနီဆီးယို၊ ယူနီခုံဖိနပ်ဘရန်းများ ပေါ်လာပြီး အရောင်းသွက်လတ္တံ့။ ဖွ၍ပွသည် ဖြစ်သောကြောင့် မဆီမဆိုင် ယူနီဒေါသသင့်၍ ကြားညပ်ကြသည်များလည်း ရှိလတ္တံ့။ ကြီးကြီးငယ်ငယ် ပုပုရွရွ ဘုစုခရု ကိုကိုမမ ဦးကြီးဒေါ်လေး ဘိုးဘိုးဘွားဘွားနှင့် သားသည်အမေတို့မကျန် ယူနီအလှုပ်တွင် နားမလည် ပါးမလည် စုံးစုံးမြုပ်ကြ လတ္တံ့။ (ဤကား ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စား ကြီးတော်နွား ကလိသွားထိုးသော ယူနီသမားတို့ အပြစ်ချည်းပေတည်း – စကားချပ်)။ အချုပ်ဆိုရသော် ကောဇာ ၁၃၇၃ သည်ကား နှစ်ရှည်လများ ပေအဖြစ်ပု၍ အန်ဒါဒေါ့ ဖြစ်ခဲ့သော ယူနီကုဒ် စင်ပေါ်ရောက်မည်ဟု အတပ်ဟောလိုက်ရပေသတည်း။ ဥုံ ပလီစိချောက်ချက် အသက်သေတစ်မနက် သွားဟ။
##(ပေါပါ့.. ရုံးဆင်းခါနီး အားနေ၍ လျှောက်ရေးထားသည်။)
Tags: Myanmar, Unicode